पार्टीहरु किन यति कमजोर हुँदैछन् ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पार्टीहरु किन यति कमजोर हुँदैछन् ?
२०७७ कार्तिक २७, बिहीबार ०९:१३ गते
हाम्रो समाजको बिडम्वना, जो नेता बन्न सक्छन् ती नेता हुन लायक छैनन् र जो नेता हुन लायक छन् ती नेता बन्नै सक्दैनन् ।
मैले साना–साना ओहदाकादेखि देश चलाउने ठूलो–ठूलो ओहदामा बसेका र बसिसकेका नेताहरुलाई नजिकबाट हेरेको छु, सबैलाई होइन केहीलाई । कसौँडीभरिको भात पाकेको छ कि छैन भनेर सबै सिताको परीक्षण गरिँदैन । केही सितालाई निकालेर हेर्दा, मिच्दा थाहा हुन्छ । त्यस्तै नेताका बारेमा बुझ्न सबै नेतालाई बुझ्न पर्दैन, केहीलाई बुझे पुग्छ । फेरि पनि यो भन्नु गलत हुन्छ कि सबै नेता उस्तै हुन् । सत्य यो हुँदै गयो कि धेरै नेताहरुमा सोच, आचरण र व्यवहार जनहितमा नभएर नितान्त आपूmकेन्द्रितमात्रै हुदै गएको देखिएको छ ।
हाम्रो समाजमा नेताको कारखाना राजनीतिक पार्टीहरु हुन् । पार्टीहरुले नेता उत्पादन गर्छन् । कारखानाको अवस्था जस्तो छ उत्पादितहरुको अवस्था त्यस्तै छ । कारखानाका ठूला नेता, मुख्य नेता, माउ नेता पार्टीका मालिक भएका छन् । मालिकले आपूmलाई चाहिएअनुसारका नेता उत्पादन गर्दैछन् । पार्टीको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडास्तरमा सङ्गठन हुने गर्छन् । त्यहाँभन्दा तल टोल हुन्छन् र टोलटोलमा आममानिस बस्ने गर्छन् । यी टोलदेखि केन्द्रसम्ममा आपूर्ति हुने नेता समाजबाट आपूर्ति गरिन्छ । जसको पनि आधार समाज हो तर कोही स्कुल–कलेज, भ्रातृमातृ सङ्गठन, पेसा–व्यवसाय आदिका नामबाट नेतालाई चाहिने उत्पादनहरु यी विभिन्न कारखानाबाट झिकिन्छन्, अर्थात् ल्याइन्छन् ।
कुनै बेला पार्टीहरु चलायमान हुन्थे र पार्टीले नेता बनाउँथ्यो । अहिले पार्टीहरु सुतेका छन् र नेताहरु चलायमान छन् । पार्टीहरु सक्रिय हुँदा पार्टीमा भएका सानादेखि ठूला पदमा बसेकाहरु सबै चलायमान हुन्छन् । त्यहाँ विधान हुन्छ, नीति हुन्छ, नियम र परम्परा हुन्छ । सिद्धान्त, आचरण, व्यवहारको बहस र छलफल हुन्छ । निस्कर्षबाट जे आउँछ त्यसलाई सबैले मान्छन्, मान्नुपर्छ ।
नेपालका ठूला पार्टीमध्येका नेपाली कांग्रेस र नेकपा हुन् । नेपाली कांग्रेसमा अल्लि पहिलेदेखि नै नेता सक्रिय थिए । दुई–तीन जना नेता मिलेपछि पार्टी नामको लर्को त्यतै सोझिन्थ्यो । पार्टीमा नीति, पद्धति, आचरण, व्यवहार, न्याय, सजायजस्ता विषयमा छलफल हुन छाडेको वर्षौं भएको थियो । नेता र नेताका खास मानिसमा भागबन्डा मिलेपछि पार्टीका सबै वादविवाद र बहस समाप्त हुन्थे । त्यो पार्टी अहिले पनि त्यसरी नै चलिरहेको छ । टाउकाहरु चल्ने र जीउ नचल्ने रोगबाट थलिएको वर्षौं भएको छ नेपाली कांग्रेसमा ।
अहिलेको ठूलो र त्यत्तिकै पुरानो पार्टी नेकपा बन्नुभन्दा पहिला नेकपा (एमाले) र नेकपा एकीकृत माओवादी पार्टी मिलेर बनेको हो । एक हुनुभन्दा पहिलाका दुई अलग–अलग पार्टीका झन्डा एउटै, सिद्धान्त अर्थात् दर्शनका गुरू एउटै कालमाक्र्स, एंगेल्स, लेनिन भए पनि आचरण, मूल्य, मान्यता, विश्वास, कार्यनीति र रणनीति फरक–फरक भएका पार्टी हुन् । संगठनको ढाँचा, आन्तरिक लोकतन्त्र, कार्यशैली फरक थिए नै । नेकपा बन्नुभन्दा पहिला तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय कमिटी नैै करिब चार हजार जनाको थियो । त्यो पार्टीमा कहिले महाधिवेशन भयो, महाधिवेशनले के–के मह¤वपूर्ण निर्णय ग¥यो, नेतृत्वको निर्माण कसरी गरियो, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी गरिन्थ्यो भन्ने विषयमा राजनीतिमा चासो राख्ने सबैका लागि जगजाहेर नै छ ।
अर्को पार्टी नेकपा (एमाले) २०४९ देखि २०७४ सम्मको अवस्थाको मोटामोटी विश्लेषण गर्दा यो पार्टीमा हुने बहस, विवाद, छलफल नीतिभन्दा नेता प्रधान भएर हुने गरेको अवस्था बढ्दै गएको थियो । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नेभन्दा आपूmलाई पार्टीका स्थानमा र राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधामा भाग पाउन र आपूmलाई सुरक्षित गर्न नेतामुखी भएर छलफलमा भाग लिने गरेको अवस्था बढ्ता थियो । ठूला नेताहरु पार्टीभित्र आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउन पार्टीका र राज्यका पदहरुको पजनि गरेर आफ्नो समूह ठूलो एवं बलशाली बनाउन लागिपरे । ठूला नेताको आडमा अरु विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी र राजकीय पदमा आपूmलाई सुरक्षित गर्न तिनका पछाडि अन्धभक्त भएर लागे । आफ्नो पक्षको ठूला नेताको अगाडि पर्दा अर्कालाई होचो देखाउन र आफ्ना नेतालाई अग्लो देखाउन जे–जे गर्नुपर्ने थियो सबै गरे । यो चरित्र झाँङ्गिँदै जाँदा पूर्वएमालेमा पनि नेताहरुमा हार्दिकता र विश्वासमा स्खलन भयो । अरु नेता तथा कार्यकर्तामा आफ्नो सुरक्षा (पद र पावरका लागि) भन्दा माथिको चिन्तन गर्नेहरु कम हुँदै गए ।
२०७४ जेठमा अचानक जस्तो लाग्ने गरी पूर्वमाओवादी र एमालेबीचमा एकता भएर नेकपा बन्न पुग्यो, बन्यो । दुई पार्टी मिलेर नेकपा बन्दा सुरूका दिनमा जुन उत्साह थियो त्यो क्रमशः हराउँदै गएको छ । यो अस्वाभाविक थिएन । अब अहिलेको नेकपा धेरै दिन एउटै पार्टीको रुपमा रहला भन्नेमा मलाईचाहिँ विश्वास छैन ।
पार्टी बलियो बनाउन संख्याको खेलमात्रैले पुग्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । अहिले नेकपा संख्यामा ठूलो छ, भयो । जनअनुमोदित पनि छ । केन्द्रमा झन्डै दुईतिहाइको सरकार, ७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार, ६५३ स्थानीय तहमा भारी बहुमत । साधारण आँखाले हेर्दा यसमा सङ्कट नआउनुपर्ने हो, तर नेकपा अहिले निकै गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
नेताहरु पार्टी बलियो बनाउने छलफल गरिरहेका छैनन् । सिद्धान्तको बहस रोकावटमा परेको छ । पार्टीमा चरित्र, आचरण र व्यवहारका कुरा हुन छाडेका छन् । पार्टीमा आपूm नै सबैभन्दा बढी योग्य र आपूmले नै धेरै योगदान गरेको भनेर कथा आपैmँले कथ्ने गरिएको छ । पार्टीमा कमिसनजीवी दलालहरुको पूmर्ति बढेको सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । दलाल पुँजीको विरोध गरेर नेता भएकाहरु दलाल पुँजी अर्थात् कमिसन र अपारदर्शी धनको आडमा राजनीति फस्टाएको देखेपछि धेरैको ध्यान र ज्यान त्यहाँबाट हट्नै सकेन । यस्तैै धनका आडमा नेता गुट बलियो बनाउने कसरत गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । गुट किन बलियो बनाउने त्यो पनि प्रस्ट छ, आपूm ठाउँमा पुग्न, पुगेकाले टिकिरहन र सबैले आफ्नालाई बढीभन्दा बढी भाग पु¥याउन ।
जनताले पत्याएको पार्टी नेकपाले सबै तहमा सरकार चलाइरहेको बेलामा भएको बहसमा सरकारका कामलाई, जनताका आवश्यकतालाई र देशको समृद्धिको एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने हो । समृद्धि र सुशासनका अवरोधहरु छिमल्ने, तगाराहरु हटाउनेबारेमा बहस र छलफल हुनुपर्ने हो । तर भएन, भएको छैन । यसको मूल कारण आपूmलाई शक्तिमा केन्द्रित गर्ने नेताहरुको ध्याउन्नको परिणाम हो, जुन सर्वत्र आलोच्य भए पनि नेताहरु यसबाट पछि हटेका छैनन् ।
यस्तो प्रवृत्ति नेतृत्वमा किन देखियो ? किन नेतृत्वमा देखिएका यस्ता स्वार्थी सोच र प्रवृत्तिमा त्योभन्दा तल भएका नेता तथा कार्यकर्ताले सच्याउन सकिरहेका छैनन् ? किन पार्टीमा नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यशैलीका बारेमा बहस हुन छाडेको छ ? यसबारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।
पार्टीमा देखिएका हरेक समस्या अब लेनदेन र टालटुले पाराले मात्रै समाधान गरिँदैछ । पार्टीमा देखिने हरेक सङ्कटको समाधान अस्थायी, लेनदेन र भागबन्डामा टुङ्गिने गरेको छ । विश्वासको सङ्कट चुलिएका कारण लेनदेन उधारोमा होइन हाताहाती हुनुपर्छ भन्न थालिएको छ । गुट अदलबदल तीव्र बन्ने गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राजनीतिक पार्टी बन्नै सकेन । नेताका व्यक्तित्वको टकराव नै त्यहाँ मुख्य समस्या बन्न पुग्यो । जनता समाजबादी पार्टी, पार्टी बन्न सक्छ कि सक्दैन अहिले नै भन्न सकिँदैन, तर पार्टी बन्ने छाँट कमै छ । स्वार्थ समूहको झुन्डमात्रै भएको छ । नेपाली कांग्रेस शिथिल छ, कार्यकर्तामा कुनै ऊर्जा छैन । पार्टीका नेता बचेखुचेको पार्टी कसले कब्जा गर्ने भन्ने दाउमा दिनरात छलकपटमा व्यस्त छन् । जनताले अल्लि बढी नै आशा र भरोसा गरेको नेकपाको हालत पार्टी कम र प्रभावशाली ठूला नेताको मोर्चा बढी भएको छ । यीबाहेकका अरु साना पार्टीको चर्चा गर्न आवश्यक नै देखिँदैन ।
पार्टीहरुको दुर्दशा किन यति गम्भीर अवस्थामा पुग्यो ? यो सोचनीय र विचारणीय पक्ष हो । राजनीतिक पार्टीहरु जीवित रहन सिद्धान्त, दर्शन, विचार, कार्यक्रम र कार्यशैली मह¤वपूर्ण पक्ष हो । पार्टीले लिएको सिद्धान्त अर्थात् विचार प्रस्ट, लक्ष, कार्यक्रम घोषित र आममानिसले बुझ्ने हुनु आवश्यक छ । पार्टीले जनतालाई बुझाउने र कार्यकर्ता बनाउने गर्नुपर्छ । पार्टीको विचार र कार्यक्रमले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्छ । देशमा भएका सबै साधनस्रोतको उपयोग कसरी गर्नें, वैदेशिक सहयोगको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पारदर्शी र व्यावहारिक नीति पार्टीहरुले प्रस्ट पार्नुपर्छ ।
पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रमलाई आत्मसात् गर्ने, स्वीकार्ने, तिनमा विश्वास गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने नेता तथा कार्यकर्ताको पंक्ति पार्टीमा हुनुपर्छ । पार्टीले पार्टी नेता र कार्यकर्ताका लागि आचारसंहिता र आचरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेता तथा कार्यकर्ताले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । नेता तथा कार्यकर्ताको आचरण र व्यवहार (आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक) पालन भए÷नभएको, पालन गरे÷नगरेको पार्टीले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । कमजोरी देखिँदा सच्याउन सक्नुपर्छ । नेता तथा कार्यकर्ताका आचरण, व्यवहार र जीवनशैली पारदर्शी र आममानिसले सजिलै जानकारी पाउन सक्ने हुनुपर्छ । पार्टीका उपल्लो तहका (केन्द्रीय कमिटी, समिति) नेताको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने विधि अपनाउनुपर्छ । वेबसाइटमा राखेर हेर्न, बुझ्न चाहने सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । भनाइ र गराइ मिले÷नमिलेको जनताले जाँच्न पाउनुपर्छ । जनताका प्रश्नको जवाफ नेताले दिने र जिम्मेवार नेता भएको आभास दिन सक्नुपर्छ ।
पार्टीका नेता पार्टीका मात्रै होइनन् ती देशका नेता हुन् । त्यसकारण तिनमा सबैको चासो हुन्छ र हुनुपर्छ । ती नेता जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ । पार्टी र नेताप्रति जनआकर्षण कम हुनु, पार्टीमा भाँडभैलो हुनु, नेताको सीमाविहीन र निकृष्ट आलोचना हुनुमा पहिलो जिम्मेवार नेता र पार्टीहरु नै हुन् । पार्टीका बैठकहरुमा पार्टीका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, मूल्य, मान्यता र नेताको जीवनशैली, आचरण, व्यवहार एवं जनचासोका विषयमा छलफल नै हुन छाडेको छ । छलफल केवल कसलाई कुन भाग दिने, कसले के पाउने, कसरी अरुलाई कमजोर पार्ने भन्नेबारेमा छलफल हुनु देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हुन पुगेको छ । सबै पार्टीमा पार्टीका बैठक औपचारिकताका लागि र गुटका बैठक धेरै हुने गरेको अवस्था छ । गुटका बैठकको मुख्य एजेन्डा नै आफ्नै पार्टीका प्रतिस्पर्धीलाई कसरी पाखा लगाउने, कमजोर बनाउने र आफ्ना गुटकालाई कसरी भागबन्डा गर्नेभन्दा माथि केही हुँदैन । त्यहाँ पार्टी कसरी बलियो पार्ने, जनचासोका विषयलाई कसरी समाधान गर्ने, पार्टीको शुद्धीकरणका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने छलफल हुँदैनन् ।
अहिले जुन अवस्था पार्टी र नेताहरुमा देखिएको छ, यसले के संकेत गर्छ भने कि पार्टी र नेताहरु सच्चिने र सच्याउने बाटोमा लाग्नुहोस् । यदि यसो हुन सकेन भने अब यी पार्टीहरुको औचित्य समाप्त हुँदै गएको छ । यसका विकल्पमा पार्टीभित्रैबाट सिद्धान्त, आचरण र विचारको शुद्धताका पक्षधरहरुले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ । किनकि, लोकतन्त्रमा पार्टीको विकल्प पार्टी नै हो ।
अपराध रोक्ने उपाय : सकारात्मक पालनपोषण
स्वास्थ्य सरोकार पिसिआर टेस्ट र यससम्बन्धी तथ्यहरु
धनी बन्ने उपाय [समय–चक्र]